भारतले नेपालमाथि लगायो अघोषित नाकाबन्दी, बंगलादेश हिडेका २५ ट्रक सीमामा रोकिए !!! – Eshankharapur
मुख्य पृष्ठ /Lockdown News/भारतले नेपालमाथि लगायो अघोषित नाकाबन्दी, बंगलादेश हिडेका २५ ट्रक सीमामा रोकिए !!!
काठमाडौं । भारतले नेपालमाथि अघोषित नाकाबन्दी लगाएको छ । भारतको पश्चिम बंगाल सरकारले निर्यात अवरोध गर्दा नेपालबाट भारत र बंग`लादेश निर्यात हुन लागेका २५ ट्रक नेपाली उत्पादन मेची पुलमा थन्किएको छ । लक`डाउनको समयमा समेत भारतबाट निरन्तर सामान आयात भइरहेको समयमा नेपाली वस्तु निर्यात हुन दिइएको छैन । विना कारण भारतले नेपाली सामानलाई सीमामा रोकेर राखेको छ ।
नेपाल–बंगलादेशबीच व्यापार गर्दै आएका व्यवसायी पन्नालाल जैनले भारत तथा नेपालको भन्सार र व्यवसायीबीचको मौखिक समझदारी अनुसार नेपाली वस्तु भारत निकासी गरिएको हो । तर, भारतीय प्रहरीले पुल`बाट प्र`वेश गर्नै दिएन ।
उहाँका अनुसार बंगा`ल प्रहरीले माथिको आदेश नआएको भन्दै सामान रोक्यो । भारतीय पक्षले गाडी अगाडी जान नदिए पछि फर्काउन पनि नमिलेको भन्दै उहाँले सबै गाडी मेची पुलमा अलपत्र परेको जानकारी दिनुभयो ।
नेपालबाट चिया, अलैंची र अम्रिसोका गाडी भारत र बंग`लादेशका लागि पठाइएको हो । चिया र अलैंची भारत तथा अम्रिसो बंगला`देश निर्यात हुँदै आएको छ । मेची भन्सार कार्यालयले कुनै पनि नेपाली कृषिजन्य उत्पादन निर्यात गर्न बंगा`लले नदिएको जानकारी दियो ।
भन्सार प्रमुख ध्रुवराज विश्व`कर्माका अनुसार नेपाली सामान नल्याउनु भन्ने आदेश भारतीय प्रहरीलाई दिइएको छ । त्यहि अनुसार नेपाली सामान भारतीय प्रहरीले सीमामा रोकेको हो ।